I-Acquia: Yintoni iPlatform yeDatha yoMthengi? | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoJanuwari 10, 2020 NgoLwesibini, Novemba 10, 2020 Douglas Karr
Njengoko abathengi benxibelelana kwaye besenza imicimbi kunye neshishini lakho namhlanje, kuya kusiba nzima ngakumbi nangakumbi ukugcina umbono ophakathi wabathengi ngexesha langempela. Ndinentlanganiso ngale ntsasa kunye nomthengi wethu ebenobunzima nje. Umthengisi wabo we-imeyile uhlukile kwiqonga labo lokuthumela imiyalezo ngaphandle kwendawo yabo yedatha. Abathengi babenxibelelana kodwa ngenxa yokuba idatha esembindini yayingangqinelani, imiyalezo ngamanye amaxesha ibichukunyiswa okanye ithunyelwe ngedatha embi. Oku bekuvelisa imfuno enkulu kubasebenzi beenkonzo zabathengi kwaye icaphukisa abathengi babo. Siyabanceda ekuyileni inkqubo kwakhona ngokusebenzisa umyalezo owahlukileyo API eya kugcina ukuthembeka kwedatha.
Zindlela ezimbalwa nje ezibangela umba. Khawufane ucinge indawo enamakhonkco amaninzi kunye nokunyaniseka kwabathengi, intengiselwano yentengiso, unxibelelwano lwasentlalweni, izicelo zenkonzo yabathengi, idatha yokuhlawula, kunye nokunxibelelana ngeselula. Yongeza kolo xolelwaniso lweempendulo zentengiso kusetyenziswa imithombo yedatha ye-omni-yesiteshi… yikes. Kungenxa yoko le nto AmaQonga eDatha yaBathengi iguqukile kwaye bafumana ukubambeka kwisithuba seshishini. Ii-CPD zenza ukuba iqumrhu lidibanise kunye nemephu yedatha kumakhulu emithombo, ihlalutye idatha, yenza uqikelelo olusekwe kwidatha, kwaye ibengcono kwaye ibandakanyeke ngokuchanekileyo kunye nabathengi bayo nakweliphi na ijelo. Ngokusisiseko, umbono we-360-degree yomthengi.
Iqonga ledatha yabathengi (i-CDP) sisiseko sedatha sabathengi esidityanisiweyo esilawulwa ngabathengisi esidibanisa idatha yabathengi kwinkampani kwintengiso, kwintengiso kunye neenkonzo zoncedo ukwenza imodeli yabathengi kunye nokuqhuba amava abathengi. UGartner, UHype Umjikelo wentengiso yeDijithali kunye neNtengiso
Ngokutsho IZiko leCDPIplatifomu yeDatha yaBathengi inezinto ezintathu ezibalulekileyo:
I-CDP yinkqubo elawulwa yintengiso -I-CDP yakhiwe kwaye ilawulwe lisebe lezentengiso, hayi isebe elihlangeneyo leTekhnoloji yoLwazi. Ezinye izixhobo zobugcisa ziya kucelwa ukuba zisete kwaye zigcine i-CDP, kodwa ayifuni nqanaba lobuchule bobuchwephesha beprojekthi yokugcina idatha. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba urhwebo luxanduva lokuthatha isigqibo malunga nokungena kwinkqubo kunye nokuveza ezinye iinkqubo. Ngokukodwa, oko kuthetha ukuba ukuthengisa kunokwenza utshintsho ngaphandle kokucela imvume yomntu, nangona isenokufuna uncedo lwangaphandle.
I-CDP idala ugcino lwedatha yabathengi eqhubekayo -I-CDP yenza umbono oqinisekileyo womthengi ngamnye ngokufaka idatha kwiinkqubo ezininzi, ukudibanisa ulwazi olunxulumene nomthengi ofanayo, kunye nokugcina ulwazi ukulandelela indlela yokuziphatha ekuhambeni kwexesha. I-CDP iqulethe izikhombisi zobuqu ezisetyenziselwa ukujolisa imiyalezo yokuthengisa kunye nokulandela umkhondo weziphumo zokuthengisa ngokwenqanaba ngalinye.
I-CDP yenza ukuba idatha ifikeleleke kwezinye iisistim -Idatha egcinwe kwi-CDP inokusetyenziswa zezinye iinkqubo zohlalutyo kunye nokulawula unxibelelwano lwabathengi.
Idatha yabaThengi be-Acquia kunye neHub
Njengoko abathengisi bachaphazeleka ngakumbi nangakumbi ngamava abaxumi, ukuhambisa idatha yabo yabathengi kwizitishi, kwiindawo zokuchukumisa, nakulo lonke ixesha lomjikelo wobomi babathengi kuya kubalulekile. I-Acquia yinkokeli kolu shishino kunye nayo Idatha yaBathengi kunye neHub unikezela:
Umdibaniso lwedatha -Dibanisa yonke idatha yakho, nakweyiphi na ifomathi, kuwo nawuphi na umthombo wedatha kuwo onke amajelo edijithali kunye nawomzimba ngaphezulu kwe-100 izihlanganisi esele zakhiwe kunye neeAPIs.
Umgangatho weDatha -Mgangatho ofanayo, idedupe, kunye nokunikezela iimpawu ezinje ngesini, ijografi, kunye notshintsho lwedilesi kubo bonke abathengi. Ngokudibanisa ngokufanayo nangokungangqinelaniyo, i-AgilOne idibanisa yonke imisebenzi yabathengi kwiprofayile yomthengi omnye nokuba ligama, idilesi, okanye umdlalo we-imeyile kuphela. Idatha yomThengi ihlaziywa ngokuqhubekayo ke ihlala iquka idatha entsha.
Uhlalutyo lokuQikelela -Iziqulatho ze-algorithms zokuzifundela ezazisa i-AgilOne's kubahlalutyi kwaye ikuncede ubandakanyeke ngcono kubathengi. I-AgilOne ibonelela ngaphezulu kwe-400 ngaphandle kwebhokisi kweemetrikhi zeshishini ezenza ukuba abathengisi benze ngokulula kwaye bachaze naziphi na iikhrayitheriya abazifunayo zokunika ingxelo kunye nezenzo ngaphakathi kwesicelo - ngaphandle kokufaka iikhowudi ngokwesiko.
Iiprofayili zabaThengi ezingama-360 -Yakha iprofayili epheleleyo ye-omni-yejelo kubathengi bakho, ukudibanisa idatha enje ngohambo lomthengi ngamnye, iwebhusayithi kunye nokuzibandakanya nge-imeyile, imbali ye-omni-transaction yomlando, idatha yedemokhrasi, ukuthanda imveliso kunye neengcebiso, amathuba okuthenga, kunye nokuqikelela kubahlalutyi, kubandakanya ukubanakho ukuthenga kunye nezihloko ezikuye lo mthengi. Ezi profayile zichaza ngobuchule indawo apho kufuneka utyalomali, indlela yokwenza umntu, kunye nendlela yokwenza abathengi bakho bonwabe.
Ukwenza kusebenze idatha ye-Omni-Channel -Kwi-interface esembindini, abathengisi banokuyila kwaye basungule intlalontle, iselfowuni, i-imeyile ngqo, indawo yokufowuna, kunye nemikhankaso yokugcina ngokuthe ngqo, ngelixa kusenziwa abaphulaphuli, iingcebiso kunye nayo nayiphi na enye idatha ekhutshiweyo, efumanekayo kuso nasiphi na isixhobo ngaphakathi kwenkqubo yakho yentengiso.
Ulungelelwaniso lomntu -Lungelelanisa umyalezo owenzelwe wena, umxholo, kunye nemikhankaso kuwo onke amajelo edijithali kunye nawomzimba, ukubonelela abathengisi ukungaguquguquki kwelizwi nokuba umthengi usebenza nini okanye nini. I-AgilOne ikwanika abathengisi isiqinisekiso sokuba bahambisa umyalezo olungileyo kumntu ngamnye, kuba i-AgilOne iqinisekisa ukuba ukwenziwa komntu wonke kusekwe kwindawo enye, ecocekileyo, esemgangathweni esemgangathweni yokugcinwa kweerekhodi.
tags: I-360-degreeidilesicpdidatha yomthengiIplatifomu yeDatha yoMthengiiprofayile yomthengiindawo yokuzibandakanyaumjelo-omni